ငွေရတု ရောက်တတ်ရာရာ အတွေးများ.. | HoLOLo....DiLoLO
ငွေရတု ရောက်တတ်ရာရာ အတွေးများ..
Oops.. ဘ၀ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကို ရောက်ပါပေါ့လား။
သွားရင်း လာရင်း လုပ်ရင်း ကိုင်ရင်း တွေ့တဲ့လူ တော်တော်များများကို ကလေးတွေလို့ပဲ မြင်မြင်လာနေတော့သည်။ (ဒီကလေးမလေး ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ..။ အော်.. ကလေးတွေကိုး.. အပူအပင်မရှိဘူးပေါ့..။ ငယ်သေးတာကိုး.. ဒီလိုပဲပေါ့..။ အစရှိသဖြင့် ) တကယ် ကိုယ့်ထက် ငယ်မငယ် မသိ။ ငယ်တယ်ချည်း ထင်နေတတ်လာသည်။
မျှော်လင့်ထားသည်များ.. ပန်းတိုင်များ.. ကြီးကြီးမားမား ထင်ထင်ရှားရှား မရှိတော့၍ပဲလား မသိ။ တနေ့ တနေ့ ရယ်နေ မောနေရင်းကကို နေရထိုင်ရတာ ပျင်းခြောက်ခြောက်ကြီး ဖြစ်ဖြစ်လာသည်။
ဟိုး.. အရင်လို အနောက်ပဲ လှည့်ရင်းလည်း မသွားချင်တော့သလို။ ရှေ့ကိုလည်း မျှော်ကြည့်စရာ မရှိတော့တော့ အချိန်တွေကို ရစ်ပစ်ပြီး အသက် ၄၀ လောက်ကို တခါတည်း ကျော်သွားလို့ ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ ခဏခဏ တွေးဖြစ်လာသည်။
‘ငါ’ စွဲလေးတော့ ဖျောက်အုံးမှဆိုပြီး ဖျောက်လိုက်ကာမှ.. ‘ငါတို့’ ဆိုတဲ့ အစွဲကြီး ဖြစ်သွားပါလေသည်။
တစ်ယောက်တည်း နေကြည့်ရင်.. ဆိုတဲ့အတွေး တွေးမလို့ ကြံကာရှိသေး.. အချစ်ဆုံးလူများ ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာက ရှည်ရှည်လာနေသည်။
ဘာလို့မှန်းမသိ accident တခုခုနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ သေရမည်ကို ယုတ္တိမရှိ မတရား ကြောက်လန့်တတ်နေသည်။ (bus ကားစီးရင်း gas အိုးထပေါက်မလား တထင့်ထင့် ဖြစ်နေတတ်လာခြင်းက အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်သည်။)
ပုံမှန်ရှိနေကျ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ၁၀ပေါင် တိုးတက်လာသည်။ (အော်.. အသက်ကြီးပြီးကိုး..)
သီချင်းတချို့ စုထားဖြစ်သည်။ (‘နေ့နဲ့ညတို့ ရေရင်လေ ၂၈နှစ်..‘ ဆိုတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုသီချင်းက နောက် ၃နှစ်အတွက်..။ မျိုးကျော့မြိုင်ရဲ့ ‘အသက် ၃၃ အထီးကျန် ဆန်လွန်းတယ်..‘….။ နောက် ‘အသက် ၄၀ လူတွေမေးတယ်.. ဘယ်တော့များမှ စားရမှာလဲ…‘ အဲလိုဆိုတဲ့ မိုးမိုး သီချင်းလေး..)
မနက် ၂နာရီ ကိုကိုကြီး ပြန်လာတာ အိမ်တံခါးထဖွင့်ပေးတော့ ခေါင်းကိုထုပြီး Happy Birthday လို့ပြောသည်။ သူမှတ်မိနေသားပဲ။ အိမ်ကထွက်တဲ့မနက်အထိ ကိုကိုငယ်က နှုတ်မဆက်ပါ။ သူမေ့တတ်သွားပါပြီ။
မနက် အိပ်ရာထတော့ ထုံးစံအတိုင်း အမေက ထမင်းချိုင့်အတွက် ပြင်ဆင်နေရင်း မနက်စာပါ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။ ၂၅နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီကိုတောင် ဒီတာဝန်တွေ ယူနေရတုန်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီတနှစ်အတွင်း အသိသာဆုံးခံစားချက်က ကိုယ့်ခံစားမှုကို ယုံကြည်လွန်းခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ လျှော့ချရင် ကောင်းမလား။ ဒီအတိုင်းထားရမည်လား မစဉ်းစားချင်သေးပါ။
သတိတရ နှုတ်ဆက် ဆုတောင်းသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ယနေ့ ၂၀၁၀ ဇွန်လ ၁၈ရက်။ မနက် ၅ခွဲ အိပ်ရာထသည်။ ရာသီဥတု ကြည်လင်သည်။ မိုးမရွာသေးပါ။ မကြာမီ မြန်မာစံတော်ချိန် ၉နာရီခွဲပါတော့မည်။
ယနေ့ စာမေးပွဲ ဖြေစရာ ရှိပါသည်။
June 18, 2010 by hololodilolo	about me, special
6 thoughts on “ငွေရတု ရောက်တတ်ရာရာ အတွေးများ..”
ချမ်းမြေ့ပါစေ. happy birthday
တို့လဲအဲသလိုဘဲလန့်နေတယ် အစ်မအိမ်က ဓါတ်ကြိုးတွေ ရှုပ်ရှက်ခက်နေတာကြည့်ပြီးဓါတ်လိုက်မှာ စိုးရိမ်လိုကတာ.
ငါလဲပဲ ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ စာမေးပွဲဖြေရတယ်တော့… သိလား
ငါဆို ပုဇွန်တောင်တံတားပေါ်က ကားဖြတ်သွားရင် တံတားပြိုကျမှာကြောက်တယ်
အင်းသေချာနေပါပြီ … 🙂